Newspapers News | Lumbini Online Patrika
बिहीबार जेठ १० २०७५ लुअप
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष निजामती कर्मचारीको तलब बढाउन नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । उक्त अवसरमा युनियनले आफ्नो १८ बुँदे माग राखेको थियो । निजामती कर्मचारी ऐनले नै प्रत्येक दुई वर्षमा महँगीको अवस्थालाई हेरेर कर्मचारीको तलब सुविधा बढाउने व्यवस्था गरेकोले पनि आगामी आवमा कर्मचारीको तलब सुविधा बढाउनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । ...
सोमवार बैशाख ३१ २०७५ लुअप
काठमाडौं, वैशाख ३१ । झन्डै १५ वर्षपछि नेपाल लोडसेडिङमुक्त देश भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन् २००३ मा मागअनुसार विद्युत् आपूर्ति नभएको भन्दै पहिलो पटक लोडसेडिङ घोषणा गरेको थियो । त्यति बेला प्राधिकरणले ठाउँ विशेष हेरेर हप्ताको एक दिन एक घण्टा लोडसेडिङ गरेको थियो । प्राधिकरणले केही वर्षअघि दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ गरेको थियो । तर, स...
राजधानीका १० ठाउँमा आकाशेपुल बन्दै
आइतवार बैशाख २३ २०७५ रवीन्द्र राज ओझा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले राजधानीको १० स्थानमा आकाशेपुल निर्माण गर्ने भएको छ। व्यापारिक प्रयोजनका लागि नभई बटुवा आवतजावत गर्ने प्रयोजनका लागि स्टिल स्ट्रक्चरको आकाशेपुल निर्माण गर्न लागेको हो। कामपा पूर्वाधार विकास विभाग प्रमुख रामबहादुर थापाका अनुसार करिब ५ करोड रुपियाँ लागतमा निर्माण हुन लागेका सबै आकाशेपुल ट्रान्सपरेन्ट हुनेछन्। क...
युएस बंगला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएकाको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउन पाँच दिन लाग्ने भएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । फरेन्सिक मेडिसिन विभागसँग सीमित स्रोत–साधन भएकाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउन ढिला हुने भएको हो । सबै मृतकको सनाखत गर्न शव महाराजगन्जस्थित फरेन्सिक मेडिसिन विभागमा पोस्टमार्टमका लागि राखिएको छ । फरेन्सिक मेडिसिन वि...
काठमाडौं - नागरिक अभियन्ता प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई महाअभियोग लगाएर नहटाए आइतबारदेखि आमरण अनशन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले मंगलबार सुरु गर्ने तय भएको आमरण अनशन एक साताका लागि स्थगित गरेका छन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छापिएको छ । विमान दुर्घटनामा परेर आफ्ना सहकर्मी चिकित्सकसहित धेरै जनाको मृत्यु भएक...
काठमाडौं - क्यानेडियन कम्पनी बम्बार्डियरले नेपालमा सोमबार भएको यूएस बंगला एयरको जहाज दुर्घटनाको अनुसन्धान गर्ने भएको खबर आजको कारोबारमा छ । बम्बार्डियरले निर्माण गरेको जहाज नेपालसहित पछिल्लो दुई दिनमा दुईपटक दुर्घटनामा परेपछि कम्पनीले नै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भएको हो । यस्तै, बंगलादेशका नगारिक उड्डयनमन्त्रीले पनि जहाज दुर्घटनाका् जाँचबुझम...
विद्यादेवी भण्डारी पुनः राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी छिन् । वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेकी भण्डारी संघ र प्रदेश सभाका सांसदको ३९ हजार २ सय ७५ मभार प्रापत गर्दै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी हुन् । नयाँ शक्ति विवेकशिल साझा र नेपाल मजदुर, किसान पार्टीले राष्ट्रपति निर्वाचन बहिष्कार गरेका छन् । मुलुकको संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रिय जीवनमा ख्य...
काठमाडौं - सरकारले आगामी चैत १ देखि मुलुकभर २० वर्षभन्दा पुराना गाडी चलाउन नदिने भएको छ । पुराना गाडीले प्रदूषण बढाएको भन्दै हटाउने निर्णय लिएको खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ । गत वर्ष फागुनमै यस्ता गाडी हटाउने निर्णय भए पनि पूरै कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । काठमाडौंबाट विस्थापित गाडी उपत्यकाबाहिर सञ्चालनमा छन् । यातायात व्यवस्था विभागले अ...
काठमाडौं - नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन आज हुँदै छ । तेस्रो राष्ट्रपतिका लागि वाम गठबन्धनको समर्थनमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएकी कुमारी लक्ष्मी राईबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ । बिहान १० बजेबाट संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सुरु हुने निर्वाचन दि...
काठमाडौं - अवैध मोबाइललाई बन्द (ब्लक) गर्न विनियमावलीको तर्जुमा भइरहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । अन्तराष्ट्रिय परामर्शदाताको सहयोगमा विनियमावली बनाउन लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । विनियमावली बनेलगत्तै अवैध मोबाइल बन्द गर्नका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरु किन्न ग्लोबल टेन्डर गर्ने प्राधिकरणको तयार...
काठमाडौं - त्रिभुवन विमानस्थलमा बंगलादेश नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियमनभित्र पर्ने युएस–बंगला एयरलाइन्सको ‘बम्बाडिएर (डिएच८डी)’ जहाज दुर्घटना हुँदा ४९ जनाको निधन भएको छ । चालक दलका चार सदस्यसहित ७१ यात्रु सवार विमान दुर्घटनामा २२ घाइते भएका छन् । यसअघि विमानस्थलभित्र साना–ठूला हवाई दुर्घटना भए पनि यति ठूलो संख्यामा मानिसले पहिलोपटक ज्यान गुम...
काठमाडौं - आकर्षक पारिश्रमिक र अमेरिका जान पाउने लोभ देखाएर पछिल्लो समय नेपाली महिलालाई लेबनान पुर्‍याउने क्रम बढेको छ । जबकि लेबनानमा कार्यरत महिला भने अध्यागमनमा जरिवाना तिरेर भए पनि स्वदेश फर्कन खोजिरहेका छन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ । लेबनान पुग्ने नेपाली महिला कामदारले भनेजस्तो सजिलो काम नपाउने मात्र होइन, चरम यातनासमेत भोग्ने गरेको बताइ...
काठमाडौं - झन्डै संवैधानिक निकायको हैसियतमा रहेका महत्वपूर्ण अनुसन्धानमूलक निकायले अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ती सबै निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा मुख्य खबर छ । राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने जिम्मेवारीमा रहेको राष...
'देउवाले त्यसो भनेपछि मेरो बोली नै फुटेन'
कांग्रेस संसदीय दलको नेता निर्वाचनबाट चुनिने भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता प्रकाशमान सिंहले दलको नेताका लागि उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेपछि निर्वाचन हुने पक्का भएको हो। आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यलाई दिएका दिवाभोजमा बुधबार सभापति...
बुटवल - प्रदेश ५ को मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदको पारिश्रमिक मस्यौदा बनाएको छ । मस्यौदाअनुसार मुख्यमन्त्रीको तलब ६० हजार ९ सय छ । मन्त्रीको तलब ५२ हजार रहेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ । त्यस्तै प्रदेश सांसदको पारिश्रमिक ४५ हजार रुपैयाँ हुनेछ । आवास, सवारी इन्धन, दैनिक भत्ता, भ्रमण भत्तालगायत ...
काठमाडौं - रङहरुको उत्सव मनाउँदा स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिनु पर्दछ । आजको कारोबारको पृष्ठ ४ मा यो समाचार छापिएको छ । तर, बजारमा पाइने रङहरुमा विभिन्न रासायनिक पदार्थहरुको मिसावट हुने भएकाले यसबाट छालामा साधारण असर हुने देखि छालाको क्यान्सरसम्म हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । बजारमा पाइने धेरैजसो रङहरुमा रसायन मिसाइएकाले यसले छालामा क्यान्सर हुने ...
पुनर्वास नगरपालिकाको (ख) गाउँमा ४ वर्षीया बालिका बलात्कृत भएकी छन् । प्रहरीले बलात्कार आरोपमा पुनर्वास नगरपालिका–८ (क) गाउँका ३६ वर्षीय भीमबहादुर श्रीमाललाई पक्राउ गरेको छ । कृष्णपुर नगरपालिका–४ मौरीफाँटामा १३ वर्षीया किशोरी बलात्कृत भएको ६ दिन नबित्दै फेरि अर्को बलात्कारको घटना सार्वजनिक भएपछि स्थानीय आक्रोशित छन् । पुनर्वासमा हजुरआमास...
मुसिकोट नगरपालिका ५ शेरीगाउँस्थित मोर्डन रिसर्च कन्ट्रक्टसन एन्ड कन्सलटेन्सी प्रालिमा नेबल टु इेलेक्ट्रिकल सब ओभरसियल पढिरहेका विद्यार्थीले गुनामौराको रुख र रुखको लहराबाट विद्युत निकालेका छन् । १० जना विद्यार्थीका टोलीले रुख र लहराबाट १९ भोल्टको विद्युत् निकालेको विद्यार्थी जयबहादुर नाथले बताए । उनीहरुले अघिल्लो बर्ष स्याउ र आलुबाट विद्युत...
नेपाली ग्यास बुलेटमा सञ्चालनमा भारतीय अवरोध कायमै - व्यवसायीको अर्बौँ लगानी जोखिममा
खाना पकाउने ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट सञ्चालनमा भारतले एक वर्षअघि खडा गरेको अवरोध अझै हटाएको छैन । भारतीय बुलेटको सट्टा नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटबाट ढुवानी गर्न ग्यास उद्योगीले नयाँ बुलेट खरिद गरे पनि सञ्चालनमा भारतले व्यवधान खडा गर्दा ती उपयोगविहीन भएका छन् । व्यवसायीको अर्बौं लगानी पनि जोखिममा परेको छ। बुलेट सञ्चालनका लागि भारतले ‘एक्स्प...
'हत्या कि इन्काउन्टर'
कानुन् हातमा लिएर घटना गराईयो भने त्यसले विधिको शासनको प्रतिरक्षा गर्न सक्दैन । भारतमा बसेर उतैका आपराधिक गिरोहको संरक्षणमा नेपाली व्यवसायीबाट करोडौं रकम असुली र व्यक्ति हत्याका आरोपी पुनको मृत्यु गैरन्यायिक हत्या हो कि इन्काउन्टर भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। एमालेसम्बद्ध युवा संघ रुपन्देही अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद तिवारी र देवदहकै फर्निचर व्यवसा...